HORROR - PhuThetKhin - Wattpad
4.1K Reads 598 Votes7Part Story
By SakuraYuuichii Ongoing - Updated Jan 02
မျက်လုံးဖွင့်လိုက်တော့...သူ သစ်တောအုပ်များကြား ရောက်နေသည်...ဘယ်လိုရောက်လာတာလဲ လည်း သူမသိ...သူသိတာက သူ့ခြေထောက်အစုံတို့...တစ်နေရာကို ဦးတည်သွားနေသည်...သူပြေးနေသည်...သစ်ကိုင်းခြောက်တို့ ကြွေမွသံက...ငြိမ်သက်နေသော တောအုပ်ဝယ် ခြောက်ခြားဖွယ်!
သူ ရယ်သံလေးတစ်ခု ကြားနေရသည်...အနောက်တွင် တစ်စုံတစ်ခုက သူ့နောက်လိုက်နေသည်...သူ ပြေးနေသည်...အနောက်က တစ်စုံတစ်ရာက ပိုနီးကပ်လာသလို ခံစားရသည်...
ရုတ်တရက် ကျောပြင်နွေးထွေးသွားမှုနှင့်အတူ ထိုအရာနဲ့ ကျွန်တော် လုံးထွေးကာ လိမ့်ဆင်းသွားသည်...
ကျွန်တော်မျက်ဝန်းအစုံ မှိတ်လိုက်သည်...ထိုအရာဧ။် ထိတွေ့မှုက မျက်နှာတစ်ပြင်လုံးဝယ်...ရေခဲတမျှ အေးစက်တဲ့ အထိအတွေ့တွေကြားမှာ ကျွန်တော်ရင်တွေ လှုပ်ရှားလှိုက်ဖိုလာရဧ။်...
' အာ့!!! '
ကျွန်တော့်ပါးစပ်က ထွက်သည့်အသံ...ကျွန်တော် ပြန်ငေးကြည့်လိုက်သည်...ဘယ်နေရာလဲ?...ညည်းညူသံတို့ လွှင့်ပျံ့နေတဲ့ အခန်း၌ ကျွန်တော် ရောက်နေသည်...အသံတချို့ကြောင့် ဘေးကို ကြည့်မိတော့...ကုတင်ပေါ်တွင်...ကောင်လေးတစ်ယောက်နှစ်ယောက်~ကျွန်တော် မျက်နှာလွှဲမလို ကြံလိုက်ပေမယ့် ကောင်လေးတစ်ယောက်ရဲ့ မျက်နှာက ကျွန်တော့်ကို အံအားသင့်သွားစေသည်...သူက ကျွန်တော်လေ...
AeriChanBaek Oct 10, 2016
ဘာလား ဘာလား ငလုနဲ့ ကလေးတျောက်နဲ့? ပီးတော့ အုတ်ူက ဘာကြီးလဲ ငဆယ်လား?
Xin_WW Oct 20, 2016
RedDraguler Oct 16, 2016
genie_hannie Oct 16, 2016
ရှည်ရှည်လေးရေးပေးရင် အရမ်းပျော်မိမှာပါ ^^
HannixHan Oct 16, 2016
အာခီးမီးဒီးစ်​ ^•^ အဲ့ပုံမကျိပူး
AeriChanBaek Oct 16, 2016
အက်ပုဒိတ် လေး နေ့တိုင်းလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင် ရှည်ကြီးရေးဖို့မတောင်းဆိုတော့ပါဘူး အဟီးးးးးးး XD
Get notified when HORROR is updated